ဆူနာမီထက်ဆိုးတဲ့ ထိုင်းရေဘေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဆူနာမီထက်ဆိုးတဲ့ ထိုင်းရေဘေး
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Oct 28, 2011 in News, South East Asia | 14 comments
အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရေကြီးမှု့ သည်လနင့်ချီခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်မြို့နားတဝိုက်ရှိ ပထုံဌာနီ၊ နွံထပူရီ၊ ချွန်ပူရီ၊ အယုဒ္ဓယဒေသမှာ ရေမြုပ်နေသည့်အတွက် လနှင့် ချီပြီး ပိတ်ထားရသည့် စက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအချို့ တို့သည်အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြရပြီး နေရပ်သို့ ပြန်ပြောင်းနေထိုင်ကြနေရပြီပင်ဖြစ်သည်။
ပထုံဌာနီတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသည့် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော် ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီး၊ ရေစကြီးစဉ်က စက်ရုံမှ နေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်အကူအညီမှမရရှိပဲ စားသောက်ရေးနှင့် သွားလာရေးအတွက် ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့်ကိုယ် ရုန်းကန်နေရကြောင်း အလုပ်သမားများက ပြောသည်။
သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်ကစပြီး အစားအသောက်၊ ရေ၊ အစရှိသည့် အကူအညီများ ရရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ရေလွှမ်းမိုးခံနေရသည့်ဒေသများအနက် အယုဒ္ဒယ၊ ပထုံဌာနီ၊ ချိုင်နက်နှင့် နက်ခွန်စဝန်ဒေသများတွင် ရေကြီးမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံနေရသည်။
နှစ်လကျော်ကြာ မိုးဆက်တိုက်ရွာပြီး ဆည်ရေဖောက်ချကာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ခရိုင် ၇၆ ခုအနက် ခရိုင် ၆၁ ခု ရေမြုပ်ကာသောင်းနှင့်ချီသည့်စက်ရုံများလည်းပိတ်ထားရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း (၅၀) အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ရေကြီးမှု ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် လူ (၃၄၂) ယောက် သေဆုံးမှု ရှိနေသည်။
ရေဘေးဒါဏ်ခံနေရသော နေရာအသီးသီးနဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ လမ်းတံတားများပုံ
ကိုယ်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ နေရာလေးတွေမှာ ရေဝင်ရောက်လာမှု့ နည်းပါးလာစေရန်
ဆိုးရွာလှတဲ့ ဒါဏ်များအပြင်မိကျောင်းမွေးမြူရေးနေရာများမှလွတ်ထွက်လာသောမိကျောင်းများရန်ကိုလဲကြောက်နေကြရသည်။ဖမ်းလို့ ရသည်များကိုဖမ်းဆီးထားရာ ကျန်နေသေးသောမိကျောင်းများလဲရှိနေသေးသည်ဟုသိရသည်။
မိုးရွာရပ်လို့ နေပင်ပူလာခဲ့သော်လည်းရေများနောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာအုံးမည်ဟု သတင်းတွေမှဖေါ်ပြနေကြသည်။(၂၇.၁၀.၂၀၁၁မှ၃၁.၁၀.၂၀၁၁)ထိ အစိုးရရုံပိတ်ရက်များအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသေးသည်။ရေများထပ်မံဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သဖြင့်
အင်မတန်မှဆိုးရွာလှတဲ့ ရေဘေးဒါဏ်ကိုခံစားနေကြရတာပါ။ပြီးခဲ့ တဲ့ ဆူနာမိဒါဏ်ထက်ကိုဆိုးရွာလွန်းလှပါတယ်ရှင်….
ဆူနာမိဒါဏ်က ရေခုတက်ပြီးခုဆင်းသွားတာလေ….ခုကတော့နေ့ နဲ့ တင်မဟုတ်ပဲလပင်ချီပြီးရေထဲမှာဒုက္ခခံနေ။ကြရတာပါ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရေးဘေးဒုက္ခရောက်ရှိနေသူများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်မလှူဒါန်းနိုင်ပဲ ကိုယ့်တက်အားသရွေ့ လှူဒါန်းလိုပါက နီးစပ်ရာseven- eleven ဆိုင်များတွင်သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်နော်…..
ထိုင်းရေဘေးအကြောင်းတွေ မတင်ရသေးတာတွေ့လို့ ရှဲလိုက်တာပါ .. အားလုံးပဲ မေတ္တာပို့ပေးနိုင်ပါစေ . . .
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ဂျာနယ်တွေထဲ မှာ ဖတ်ဖူးတာက ဘန်ကောက်ဟာ နောင်နှစ်၃၀ နေရင် ပင်လယ်ရေအောက် ရောက်မှာ ဆိုကလား၊ ယခုတော့ ယိုးဒယား သူားတွေခဗျာ ၊ ဒုက္ခပင်လယ် ဝေပေါ့ ။
ရေမြန်မြန်ပြန်ကျပါစေ ၊ အားလုံးပဲ ဘေးမသီရန်မခ ကျန်းမာကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ
အမေတီကန်ကြီးတော့ အဓိက ကူညီပေးနေမယ် ထင်တာပဲ
ကျပ်တို့ ဘက်လဲ မလာပါစေနဲ့ ဦး..
သတင်းတော့ ကြားနေတာပဲဗျာ အဲဒီလောက် ဆိုးဝါးနေမှန်း မသိဘူး …
တို့ဆီမှာ မိုးရွာလို့ မြောင်းပိတ်သလောက် ထင်တာကိုးဗျ …
အခုတော့သိသွားပြီ … ကျေးဇူး ကျေးဇူး
အင်းပါ ကွန်နရှင်ကလည်း တော်တော်စုတ်တယ် ပို့စ်အသစ်တင်ဘို့မပြောပဲ browser လေး ဖွင့်ဘို့တောင် မလွယ်ဘူး ရေကတော့ထပ်ကြီးဦးမယ်ပြောတာပဲ . ကယ်ဆယ်ရေးကောင်းလို့ မြန်မာပြည်ဆို အကုန်အမျိုးပြုတ်ပီ
ထိုင်းရေဘေးကြောင့် ပြည်တော်ပြန်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို စနစ်တကျနဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ခပ်မြန်မြန်ထက်ထက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်..။
ဆူနာမီ၊ ထိုင်းရေဘေးထက်ဆိုးတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေရဲ့ငွေညှစ်သတင်းတွေက ကြားရတာမကောင်းပါဘူး…။
ထိုင်းနိုင်ငံသားများလည်း ဘေးအန္တရာယ်များ ကင်းရှင်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ…။
ဟုတ်တယ် ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေ ကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီသင့်တယ်…ကူညီရမယ် … ဘာလို့ အဲ့လိုတွေ လုပ်နေကြတာလဲ …ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ရောက်မှ ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကြီးက ကြားမကောင်းပါဘူး……
ရေဘေးမှ မဟုတ်ဖူး ဘယ်ဘေးမှကို မကောင်းတာ… ကိုယ်ချင်းစာတယ်…..
သူတို့ တွေ လည်း အတော်ကို ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတာပါလားနော်…
ထိုင်းေ၇ဘေး ကို ဒီလောက်ထိတောင် ဆိုးဝါးလိမ့် မယ် မထင်မိဘူး။
အခု ဓာတ်ပုံတွေ။ ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေနဲ့ မို့ အတော် ပြည့် ပြည့် စုံစုံ သိရလို့ ကျေးဇူးပါဘဲနော်။
ဆူနာမိဒါဏ်ထက်ကိုဆိုးရွာလွန်းလှပါတဲ့ေ၇ဘေးသင့် နေ တဲ့ ထိုင်းပြည်သူတွေနဲ့ ထိုင်းမှာေ၇ာက်ရှိနေတဲ့
မြန်မာတွေ အတွက် အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကံဆိုးလှစွာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင် ငံရဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ ကြုံကြ၇တယ်လို့ ။ သတ္တ၀ါတွေဟာ သူတို့ ကံ အတိုင်း
ဖြစ်ကြရ တာဘဲနော်။ တ၇ားသဘောနဲ့ကြည့် ရင်ပေါ့ ။
ဒါနဲ ”့(၂၇.၁၀.၂၀၁၁မှ၃၁.၁၀.၂၀၁၁)ထိ အစိုးရရုံပိတ်ရက်များအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသေးသည်။ရေများထပ်မံဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သဖြင့်…..့”
ဆိုတော့ နောက်ထပ် ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ထိေ၇ က မကျဘဲ ၇ှိနေဦးမှာလဲနော်။
ေ၇မြန်မြန်ကျပြီး အားလုံးဘဲ ဘေး အန္တ၇ာယ် ကင်း၇ှင်းကြပါစေလို့ …
သူများနိုင်ငံမှာ ကယ်ဆယ်ရေးက ကောင်းလိုက်တာနိုင်ငံရဲ့ ၆၀% ကို ရေလွှမ်းတာ လူအသေအပျောက်က သုံးရာကျော်ပဲရှိတယ်
နာ့တို့ နာဂစ်များတော့ လူဘယ်နှစ်ယောက်မှန်းတောင်မမှတ်မိတော့ဘူး .. ကယ်ဆယ်ရေးကောင်းပုံများပြောပါတယ်.. ထမင်းထုပ်လုတဲ့လူနဲ့ …. ကယ်ဘို့သွားရင်တောင် မှတ်ပုံတင်လေးတော့ပါမှ . ပြီးတော့ မြင်လိုက်ရတဲ့ location လေးက လှတပတလေး
သေနေတဲ့လူတွေ လယ်ကွင်းပြင်မှာအဖွေး .. ချောင်းထဲမှာမြော .
သူတို့ဆီ မှာ ရေဘေးသတိပေးချက်က သုံးနာရီတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်တယ်
ငါ့တို့မြန်မာပြည် မပူနဲ့ သတင်းလာတိုင်း ပါတယ် .
နာဂစ်ပုံနဲ့တောင်ယှဉ်ပီး တင်လိုက်ချင်သေးတယ်း)) အားလုံးကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေး)
မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ …. ရေတွေ ဒီလောက်ကြီးနေတာ ရေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် … ရေတွေ ပြန်ကျသွားဖို့ လနဲ့ ချီပြီး ကြာမယ်လို့ ဘလော့တစ်ခုက ခန့်မှန်းတာ ဖတ်လိုက်ရတယ် … ။
ရေတွေကြီးတာ မြင်တော့ သနားစရာ ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ ဖြစ်မိတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ စဉ်းစားမိတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ ဆိုပေမဲ့ အင်းအိုင် လက်ဖွဲ့ ၀ါသနာ ထုံတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်နေတယ်။ ရေကြီးတဲ့ သတင်းနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ အတွေးသက်သက်ပါပဲ..
ဒေါသ အားကြီးရင် မီး
လောဘ အားကြီးရင် ရေ
မောဟ အားကြီးရင် လေ
အင်းအိုင် လက်ဖွဲ့တွေနဲ့ အဆောင်အတား မျိုးစုံ နေရာတိုင်းမှာ အင်းကွက်တွေ လက်ညိုးထိုးမလွဲ တွေ့နေရတဲ့ ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ ထိုင်းတွေ လောဘတွေ အားကြီးမှု သိပ်များသွား နေလို့များလား.. စပ်မိ စပ်ရာ အတွေး ဇာချဲ့ ကြည့်တာပါ။
သဲအင်းဂူယောဂီ တွေ့ဆုံခန်းအသံဖိုင်တခုမှာ သဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီးက ကမ္ဘာကြီး ရေဘေးဒုက္ခကြုံလိမ့်မယ်၊ တရားစောင့်ဖို့ မှာခဲ့ကြောင်း ပါတယ်။ သဂျီးကတော့ အာချောင်လို့ လေဘေးနဲ့တွေ့မှာ၊ အပြောလျော့မှ တော်ရုံကြမယ်ဗျို့…။
ကျွန်တော်တို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဘို့ လိုပါတယ်ဗျို့။